Qormo: Ma istidhi Puntland Waxey Joogtaa Waqtigii Gobalka Sool Ay Fatwo Ku Daahirin Laheyd? By, Asadnaa Suudi. – Radio Daljir
Maajo 26, 2018 4:16 g 0
Hadda ka hor baa Shiikh lagu magacaabo Shamsudiin ibnu Khalikaan ayaa ku sheegey kitaabkiisa Wafiyaat nin baa habeen cabey khamri ama sharaab wax sarkhaamiya. markii hadhow waagii baryey oo uu miyirsadey ayuu shakiyey oo ismoodsiiyey intuu xaley marqaamey in uu xaaskiisii furey, kadibna Sheikh Abuu Xaniifa ayuu u yimid wuxuu yidhi Abu Xaniifoow xaley ayaan cabey Illahey ha ii dambi dhaafee waxaana shaki ka qabaa iney dalqad iga dhacdey oo aan xaaskii furay ee islaantii ma u hoyan karaa mise waa iga furantahey?
Abu xaniifa wuxuu yidhi shakigu waxba kuma furmaan xaaskaaga iney xaaskaaga tahey oo aadan furin dalqadna eysan kaa soo bixin wax lahubo weeye sideeda kudaa ilaa aad hubsaneyso dalqad iney kaa soo baxdo adigoo oo maankaagu joogo.
Ninkii su’aasha watay kuma qancin Abu Xaniifa wuuna kasoo tagey wuxuuna u yimi Shiikh kale oo la odhan jiray Sufyaannu Al-thawri wuxuuna ku yidhi xaley ayaa sheedaan iyo nafi iga faro xasheen oo aan cabey kadibna intaan jidbeysnaa ayaan waxaan ka shakiyey in aan gabadhii furey ee bal si idheh. wuxuu yidhi ma sidaas baa “HAA” hada islaantaadii soo cesho waxaad tidhaahdaa xaaskeygii waan soo ceshedey anigana I markhaatigeli in aad soo ceshetey waayo hadii uu waxba kaadhicin soo ceshigu waxba kuyeeli maayo hadii islaantu dalqad kaa faniinteyna waa soo ceshetay saasbaa khayrku kujiraa ee Horey usoco.
Kuma qancin ee hadana wuxuu u tagay Shiikh la odhan jiray Shariif Abdullaahi Al-Naqaci oo is yidhi bal talada wadaada badso wuxuuna ku yidhi SHARIIF hooshaas ayaa igu dhacdey ee bal ka fatwoow wadaadoow.
Wadaadkii wuxuu ku yidhi xaaska hada fur soona cesho, shaki soo kuma gelin dhab iyo run ku bedel kadibna islaanta hal dalqad ku dhufo soona cesho si aadan dib dambe sheedaan kuu was waasin. waa furtey waadna soo ceshetay waxaana markhaati ka ah Shariif Abdulaahi Al-Naqacai.
Ninkii dhagahuu taagey wuxuuna iskula shoorey tii hore ayaad u taag la’ayd waaba mid laabaad siidaa kadibna islaanta soo cesho arintaas wuu ku qanci waaye wuuna iska tagey.
Sufar al-hudari oo Ardaydii Abuu Xaniifa ka mid ahaa ayuu u tagey markaas buu yidhi dhibkaas ayaa iqabsadey ee ii fardoow.
Sidii Abuu Xaniifa ayuu ugu jawaabay wuxuuna ku yidhi kashigaas waxba ka majiraan ee Horey usoco.
Markuu u Jawaabay ayuu weydiiyey majirtaa wadaado kale oo aad u tagtey? Haa ayuu ugu jawaabey kadib wuxuu usheegey inuu Abu xaniifa utagey sidaas iyo sidaas ayuuna iigu fadwoodey (waa uu haleelay) wuu asiibey, yaa ka loo soo martey?
Sufyaanu al-thawri oo sidaas iyo sidaas ayuu isaguna iigu fadwoodey, si saxan ayuu kuula dhaqmey iyo alla ka cabsi oo waana wadada dadka wanaagsan. Yaa ka loo u tagtey?
Waxaan u tagey Shariif Abdullahi al-naqaci Muxuu kuyidhi? Sidaas iyo sidaas Qosal buu ladhacey islaanta fur soona cesho qosal buu kajiidey wuuna ku maadeystey. Wuxuuna ku yidhi aan tusaale kusiiyo ninyahow si aad wax ufahantid. arinta sedex qaab ay wadaadadu kuugu jawaabeen waxey ka dhigan tahey adigoo soo marey meel tog’ah oo biyo ka qul qulayaan oo tafta ama faraqa maradii biyuhu kaa qoyeen waxaadna ka shakidey faraqa aad martey ee marada kaa qoosey armuu nijaaso ahaa iyo inkale waxaadna ogtahey in maraadu daahir tahey faraqana nijaaso kuma ogid shaki uun baa kugaley kadibna Abuu Xaniifaa u tagtey waxaad tidhi tog ayaan soo marey maradii ayuu iga qooyey ee maku tukan karaa? Oo uu ku yidhi Shakigu ma tirtiro runta ee oradoo tuko taas waa jawaabta Abuu Xaniifa.
Tii Sufyaan Al-thawri waa adigoo lagu yidhaahdo faraq masoo martey “HAA” Maka shaki santahey inuu nijaaso yahey “HAA” hadaba maradaada dhaq biyo geli hadii ey maradu nijaaso aheydna kuu daahiroowdey hadii ay daahir aheydna wey kuu siicadaatey baftee kuu noqotey waxna kuma yeelin.
Shariif Abdullahi Al-naqaci waa isagoo ku yidhi marada maka shakidey in faraq nijaaso ah soo martey, hada ku kaadi kadibna dhaq, marada hada si fiican u nijaasey kadib dhaq si aad shakiga oo dhan uga baxdid. Tusaalahaas ayaa u dhigma jawaabihii wadaadadii ay sidaas uqaado.
Hadaba laba kacleyntaan maamulka Puntland la soo baxey ee ku aadan dib u xoreynta Gobalka Sool Mala odhan karaa Puntland hada waxey garoowsatey fadwadii Shariif abdulaahi Al-naqaci oo aheyd soow marada kama shaki sanid iney nijaaso tahey, hada ku kaadi oo wada meeydh. Taasi waxey Puntland uga dhigantahey mar hadii gobalkii laga soo wada qabsadey sida Yagoori, Aricadeeye, Laascaanood, Gambadho iyo Tukaraq soo hada lama gudboona shacab iyo siyaasiyiinba gudo iyo dibad in ay kaalintooda kaqaataan sidii gobalka loo wada daahiriin lahaa iyadoo madaxda sare ee Puntland na maanka iyo maskaxda kuheyso fatwada Sheikh Shariif Abdullahi Al-naqaci.
Mediator at Madasha lixdanka, Columnist and Political activist.